Guurka Gabdhaha Soomaaliya Ku Nool Oo Noqday Mid Qaali Ah, Sababta Maxay Tahay??!! | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Guurka Gabdhaha Soomaaliya Ku Nool Oo Noqday Mid Qaali Ah, Sababta Maxay Tahay??!!
Published: April 11, 2016, 4:16 pm
Guurku waa aasaaska noolasha, waayo waa jidka kaliya ee lagu helo jil cusub oo badala dadkii waaweeynaa, waxaana uu qofka galiyaa xasilooni iyo farxad.
Soomaaliya dhaqankeeda waa kan diinta Islaamka ay jideeysay mana jiro dhaqan ka fiican ee aduunka lagu dhaqmo waa dhaqan kala saara xumaanta iyo wanaaga balse waxaa layaab noqotay in dhaqankii asaga ahaa ay dad badani katageen.
Waayo waxaa xeer laga dhigtay in ninkii guursan rabo uu meherka bixiyo 30g-60g oo dahab ah, hal neef oo geel iyo iidaankii markii gawraco lagu dari lahaa, sariir nooca loo yaqaan Wareeg, daahyo iyo joog dhago iyo katiinad ah.
“Waxaa intaasi dheer in laga rabo yaradii iyo sooryadii aabaha iyo hooyada la siin lahaa. Hadii lacagtaan la isku daro waxaa ay gaareeysaa $4000 dhaqankaan ma ahan mid ku sugan diinteena suuban”
Sida aan ognahay burburkii wadanka ka dhacay waxaa uu galaaftay dhamaan ilihii dhaqaale, hadaba waxaa adag si lagu helo shaqo. Boqolkiiba sideetan dhalin yarada Soomaaliyeed waa shaqo la,aan mana awoodaan in ay helaan lacagta cadadkeedu sidatan u badan yahay.
Tani waxaa ay sababtay in aad aragto dhalinyaro aad u da weyn walina aanan guursan markii aad weydiiso sababtana waxaa ay kuu sheegayaan in aysan haysan lacagtaan aadka u badan ee naaga lagu aroosayo. Maadaama uu guurkii yaraaday waxaa badalay in ay sinadu kor u kacdo waayo Soomaali waxay ku maahmaahdaa Wareebe geed haay ama gibil haay. Waxaa badatay in ay dhashaan ciyaal farabadan oo aabo la,aan ah.
Waxaa dhaqankaan xun ka dambeeyo waa waalidiinta Soomaaliyeed hadaba waxaan jeclaan lahaa in aan weydiiyo su’aashaan, Intaad arki lahayd gabadhaada oo ilmo xalaal ah dhaleeysa ma waxaad ka fiican in ay ilmo aan xariga Islaam ku dhalan dhasho?.
Waxa waalidiinta arintaan jecleeysiiyayna waxa ay tahay in rag ka yimid qurbaha ay dalka gabdho u soo raadsadaan ayagoo ku bixinaayo lacag aad u badan taas oo mararka qaar gaarto $600 (Lix kun oo doolar) balse waxaa ay waalidiinta ogeyn in raga qorbaha ka imaado aysan wada guursan Karin gabdhaha dalka ku nool waayo gabdhaha ayaa had iyo jeer ka badan raga.
Tusaale waxaa noo ah in ay mar walbo caasimadeena ay ku dhintaan 10-12 oo rag ah markiiba walina taariikhda Soomaaliya laguma arag dumar intaa la eg oo hal mar dhinta. Ragu dhimashadiisa waa saa’id dhalashadiisa waa ay hooseeysaa maadama ay ayagu yihiin kuwa mar walbo dagaalada ka qeyb qaata.
Su,aashani waa mid aan ugu talagalay waalidiinta Soomaaliyeed ee guurka gabdhahooda ka dhigay ganacsi si ay wax ugu fahmaan, ma waxaad dooneeysaan in ay bulshadeena dabar godo, lana waayo abuur dambe?. Ugu dambeyn waxaan talo ahaan iin siin lahaa in aad guurka fududeeysaan waayo waxaa la yiri gabar gunti rageed ha ku jirto ama god.
Qiso Cajiib Ah Maxaa dhex Maray Haarun Al-Rashiid iyo Ninkii Waalnaa..